Ngaba ndingumngxunya we-A **?
NgoLwesine, Novemba 20, 2008 NgoLwesihlanu, ngo-Ephreli 23, 2021 Douglas Karr
Ngaba ndiyi ** umngxunya? Abafundi bebhlog yam banamathela kum kwaye bathethe ngembeko, uthando kunye nemfesane endizama ukubonelela ngayo ngebhlog yam. Ngokuqinisekileyo yinto endiyenzayo neprojekthi kunye nokuzama kwam ukusebenzela ukugqibezela usuku ngalunye. Izithuba zebhlog zinoncedo lokucwangciswa kwangaphambili (nangona ngaphambili, bendilungile), kodwa okwenyani akusebenzi ngaloo ndlela. Ndihlala ndinomdla wokutya